China Kukuru Mukutonga kwechiFascist Manufacturer uye nokutengesa | Anteli
Silicon carbide crucibles imhando ye ceramic yakadzika mbiya-mhando mudziyo. Kana zvikaitika kuti moto unopisa pamoto muhombe, chinoshandiswa pakurovera chinoshandiswa. Nesilibhoni carbide Kukuru Mukutonga kwechiFascist iri nani kukwanisa kutsigira dzakakwirira tembiricha pane glassware, uye zvinhu zviri Kukuru Mukutonga kwechiFascist kuti yakanyungudutswa haangavi zvakare kuzara, kudzivirira kudziyisa zvinhu kubva kusvetuka kunze uye kubvumira mhepo kuti rusununguko kuwana kune zvinobvira oxidation siyana. Nekuti nechepazasi pekurovererwa idiki kwazvo, chinorovererwa chinowanzoda kumira patiplaylay netriangle yekudziya yakanangana nemoto.
Chokurovererwa chinogona kuiswa pakatatu yedare nenzira yakatwasuka kana yekuita diagonal, uye inogona kurongedzwa wega zvichienderana nezvinodiwa pakuedza. Mushure mekudziya, iyo crucible haizoiswe ipapo patafura inotonhora yesimbi, kudzivirira kuputika nekuda kwekutonhora kwakapinza, uye zvakare haizoiswe ipapo patafura yematanda, kudzivirira kupisa desktop kana kukonzera moto.
Silicon carbide crucibles anonyanya kushandiswa mukugadzira simbi, kukanda, michina, makemikari uye mamwe maindasitiri zvikamu, uye anoshandiswa zvakanyanya mukuyera simbi yekushandisa simbi uye fusion yekunyungudutsa simbi dzisinganetsi uye alloys, uye hunyanzvi uye hupfumi mhedzisiro zvakanaka.
Iyo ine yakanaka yekupisa conductivity uye yakanyanya tembiricha kuramba. Mukuita kwekushandisa tembiricha yakakwira, iyo coefficient yekupisa kwekuwedzera idiki, uye ine kumwe kushushikana kwekumelana nekukurumidza kupisa uye nekukurumidza kutonhora.
Iyo ine yakasimba ngura kuramba kuacid uye alkaline mhinduro uye yakanakisa kemikari kugadzikana.
Inofananidzwa ne graphite crucible, silicon carbide Kukuru Mukutonga kwechiFascist ane hunhu guru vhoriyamu arambe achirema, mukuru tembiricha nemishonga, kutsanya kupisa chinja, asidhi uye alkali nemishonga, mukuru tembiricha simba uye yakakwirira oxidation nemishonga.
Hupenyu hwebasa hwakareba zvakapetwa ka3-5 kupfuura ivhu giraiti graphite.
Pashure: Burner kamwene
Zvadaro: Pfeka Sleeve Tube
Sic Kukuru Mukutonga kwechiFascist